Izinqolobane Zabafundi »IHodges University
Ukwazi Manje Lokho Akwaziyo Manje - #MyHodgesStory UMartha "Dotty" Faul Kudala ngaphambi kokuthi uMartha “Dotty” Faul abhalise eHodges University, uchithe iminyaka ecishe ibe ngu-20 akha umsebenzi wokuqinisa umthetho kuwo womabili amahhovisi eDeSoto County Sheriff naseHhovisi likaSheriff likaHhovisi likaSheriff. Ukusuka ekusebenzeni kokugadwa komgwaqo njengephini likasherifu ekuphatheni uphenyo lobugebengu [...]	Funda kabanzi
Pushing Through Limitations - USteffanny Golding Uqhubeka Ngaphezu Kwaso Sonke Isazi sefiziksi nesazi samakhemikhali uMarie Curie wake wathi, “Impilo ayilula kunoma ngubani kithi. Kodwa kuthiwani ngalokho? Kumele sibe nokubekezela, futhi ngaphezu kwakho konke, sizethembe. Kumele sikholwe ukuthi siphiwe okuthile, nokuthi le nto, noma ngabe kubanjani, [...]	Funda kabanzi
Ukufunda Ukuhola Kunanoma yiliphi Izinga
Isifundo Sokucima Umlilo Esisodwa Esiqinisekiswe Ukufunda Ukuhola Wake wawasho yini amagama athi, “Azikho amahora anele osukwini” lapho ubheka ikhalenda lakho? Ihora ngalinye linomsebenzi ohlukile noma isibopho, futhi uma unenhlanhla, amahora ambalwa anikelwe ukulala. Kungaba lula ukucabanga ukuthi [...]	Funda kabanzi
Izindlela Eziyisithupha Zokuphumelela embukisweni Wezemisebenzi
Izindlela Eziyisithupha Zokuphumelela Embukisweni Wezemisebenzi NguJama Thurman, iMenenja Yezokwelulekwa kanye Nezinsizakalo Zomsebenzi Ukuya embukisweni wezemisebenzi kungabonakala njengomsebenzi onzima. Ungaba ngomunye wabangenele ukhetho abaningi abancintisana nokunakwa ngumqashi, kepha ungathola inzuzo ngaphezu kwabanye ngokulandela le mihlahlandlela yomsebenzi [...]	Funda kabanzi
Impilo Yokuqala. Omunye umfundi ongumakadebona wazifeza kanjani izinhloso zakhe ngokubona i-A Life of Firsts. Uma u-Edward Davis engakhetha igama elilodwa azichaze ngalo, linga "qhutshwa. " Kusukela empilweni yezempi, ukuba ngumfundi othweswa iziqu ekolishi lesizukulwane sokuqala nokuqhubeka nemisebenzi yakhe yokufunda kuhlelo lwenkosi, ukuphatha eyakhe [...]	Funda kabanzi